Enye yeengxaki abambalwa abantu abafuna ukuthetha ngazo kwaye kaninzi abazange baqaphele ukwabelana nabantu babo abasondeleyo kunye nezihlobo kukuqhawulwa. Ukugqithwa nakho kunako ukubeka ubunobumba bethu ngobuninzi, kuba ngubani onokuphila ngokuthula, ukuba umgangatho wesisu usondele ukuva ubunzima, ngamanye amaxesha ubuhlungu bezinto ezahlukeneyo, ukunyaniseka nokunye okunjalo. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba usebenze ekubambeni kungekhona nje nge-laxatives, iipilisi, iifom laxative kunye netiyi yokulahleka kwesisindo. Yonke into ibulula kakhulu - kufuneka nje ufunde ukutya ukuze amathambo akho asebenze ngaphandle kokuphazamiseka, ngokuzimela. Kakade ke, oku akusoloko kwenzeka ngokukhawuleza, kodwa khumbula ukuba yimveliso enesiphumo sokuxhatshazwayo esona sihle kakhulu kwaye siphephe kakhulu, ngokukodwa xa kuyimfuneko, ngokukhawuleza ukugqithiswa kuhamba ngokukhawuleza kwaye le nto iyahamba kakuhle.
Iimbangela zokuqhawulwa zingaba zihluke kakhulu, iingcali zithi ukugqithiswa kubangelwa utshintsho oluthile kunye nokuphazamiseka emathunjini. Kungenzeka ukuba ezinye izifo ezingapheliyo zikhula, umzekelo, isifo sesilonda sesilonda okanye ukubunjwa kwama-polyps emathumbu. Into ebalulekileyo kukuba ukuba unokuqhaqhazela okuqhubekayo kunye nokuhlala ixesha elide, kubalulekile ukuba ubone ugqirha, kufuneka ufumane ukuhlolwa kwesifo esifanelekileyo, kwaye ungavumeli ukuba lesi sifo sihambe ngokwawo-mhlawumbi siya kuhamba, kwaye singabandakanyeki kunyango oluzimeleyo, njengoko kungabangela ingozi.
Izizathu eziqhelekileyo eziye zenza ukuba utshintsho olubi kumsebenzi wamathumbu luyilo: ukungondleki; i-hypodynamia - ukunyanzeliswa kokunyuka; Ukusetyenziswa kakubi kweepilisi zezilwanyana akusona mgangatho ophezulu, umzekelo, amaqanda, inyama kunye nokunye, kunye nokutya ukutya okucutshiwe. Ngokuqhelekileyo, abahlali bezixeko ezinkulu badla ukutya okukhawulezileyo kunye neemveliso ezigqityiweyo, kwaye le mveliso ayinayo into encedo kwaye akukho fiber eyokwenza amathumbu enze umsebenzi oqhelekileyo. Kwakhona, ukunqunyulwa kungabangela ukuthotyelwa kweentlobo ezithile zokutya, ngokugqithiseleyo zigcinwe ngexesha elide, ukutya kukuphazamisa umsebenzi wamathumbu, ngenxa yoko kuphelelwa ukuzikhupha.
Imveliso enefuthe lexate
Eyona ndlela ihle kakhulu yilexatives yilapho kukho i-fiber eyaneleyo, iquka ukutya okusanhlamvu, imifuno, izithelo, izityalo. Ukutya okunotye kwi-fiber kunokunyusa inani leebhaktheriya ezinothando ze-asidi emathunjini. Ezi bhaktheriya aziyingozi kuphela, zinenzuzo, zibambe inxaxheba kwinkqubo yokucubungula ukutya, kwaye ekugqibeleni zenze i-acids ye-fatty chain acids. Ezi zinto ziyimfuneko ebalulekileyo emisebenzini yamathumbu, zilawula umsebenzi weemoto; ukubonelela nge-intestinal microflora ngamandla anamandla; khuthaza ukuhamba kwegazi; ukuphucula umsebenzi wokukhawulela weendonga, ukungavumeli iipilisi ukuba zifike kwezinye iimeko zomzimba; ukugcina izinga le-pH kwisiqhelo, njl. Zonke ezi nkqubo zinzima, kodwa ngokubanzi zifumaneka ukuqonda. Ngaphambi kokujongana nokuqothulwa, kufuneka ube nombono wendalo yabo, kwaye uqonde indlela yokuphatha ngayo.
Iilexatives eziphumelelayo zininzi kakhulu. I-Bran kule ndawo ihlala ihlala kwindawo eyokuqala, kuba izele i-fiber ebanzi kunye ne-vithamini B. Sebenzisa i-bran kuqala kwi-isipuni ngosuku, emva kweeveki ezimbini uzama ukwandisa ukungena kwi-spoon of times 3 ngosuku . I-Bran ithengiswa kuma-pharmacy nakwiivenkile, ubilise ngamanzi abilayo, yindlela kuphela eya kuyenza. Emva kwemizuzu engama-30. Amanzi awathulule, kwaye ungeze ibhan e-porridge, isaladi, isobho kunye njalo. Isonka kunye ne-bran sinomphumo omangalisayo we-laxative, kodwa ungabonakali.
Inyathelo elimangalisayo linomphunga onomdla kakhulu. Imifuno yekwindla ayilungiswanga kuphela iphalaji yempuphu. Ikhumba ingadliwa kwaye iluhlaza - ukongezwa kumasaladi, okanye ngokuhlukeneyo, unako ukupheka, ukupheka, ukubhaka, ukunambisa. Ipargiji ekulungiselelwe kakuhle kunye ne-millet yinto enhle kakhulu, isondlo kwaye inomsebenzi kwaye iyancipha.
Abaninzi bancedisa ukuthungula, bathi, kusebenze kangcono kunomthi. Ukukhethwa kwemveliso yinto ethile. Ungadla izityalo eziluhlaza okanye eziphekiweyo, uphuze utywala okanye u-decoction, amajikijolo kufuneka ahlambuluke. Ukutshala izilwanyana kusebenza njengesondlo esilungileyo kwi-calorie ephantsi, yongeza ekubhaka kwi-flour ecocekileyo kunye nokutya. Umhluzi we-prunes awuyingozi nakubantwana kuze kube unyaka, apha uquka i-sweet plum juice kunye namazambane ahlambulukileyo.
I-Oatmeal, i-decoction ye-oats, i-oatmeal yindawo ekhethileyo yekhaya epholileyo. Sebenzisa i-grains epheleleyo okanye rhoqo "iHercules", kwaye akuyiyo iphalaji yento ebizwa ngokuba yinto yokupheka ngokukhawuleza.
I-Saladi "i-trowel" - nayo isisityebi esihle, kodwa sibizwa ngokuba kunjalo ngenxa yokuba ihlambulula ngamathumbu ngokugqibeleleyo, njengomhlaza ogqityiweyo ongafunekiyo kwaye ungadingekile. Isaladi iquka imifuno eluhlaza: iidroti, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, i-beet, iklabishi emhlophe, ukuba isisu sisinyamezela, ngoko unokongeza isaliti okanye i-turnip, i-oyile notyuwa akufanele ifakwe.
Iifama - kwakhona ukhetho, luphucula umsebenzi wamathumbu. Gweba iipasta ezomileyo uze uthathe isipuni nje kuphela ngosuku, ngoko uza kuzisa kancane isitulo ngokuqhelekileyo.
Imbewu yefleksi, ukuba kuthengiswa, iyinhle kakhulu. Kuye kulula ukuyithenga njenge-bran, kulula ukuyithenga, ngaphambi kokuba ulale, uphuze ingilazi ye-infusion ye-linseed, kwaye udle imbewu edibeneyo, ukuhlafuna. Imbewu ivula iiyure ezingama-5, ngaphambi kokugcwalisa 1 tsp. Imbewu eneglasi yamanzi abilayo.
Kukho ezinye iimveliso ezifikeleleke kuwo wonke umntu kwaye zineempembelelo. Kulo nawuphi na uhlobo lwesibhobho ebomvu kunye no-anyanisi, izandi zemifuno, nayiphi na, kunye ne-pulp, xuba isipinashi okanye ijusi ye-beet kunye nejisi yesiliva kunye neekroti uze uphuze ingilazi ubuncinane kanye ngosuku. Kwakusasa ekuseni ngesisu esingenalutho kunceda ukuthatha iglasi yamanzi ngepuni yeju. Ngaphambi kokuba ulale, yisele ingilazi ye-kefir nge-2 tsp. ioyile yemifuno, siphuze ngokukhawuleza, kwi-sips encinci. Bonke abo basebenza bodwa, kufuneka usebenzise imveliso yobisi yobunandi obungaphezu kweyodwa.
Iintlobo ezinomphumo we-laxative
Ama-apula, i-tangerines, iiperesi, izithelo ezomileyo - iifricot ezomileyo kunye namakhiwane zicetyiswa rhoqo; kwakhona buthathaka yonke imifuno eluhlaza, ngaphandle kwe-broccoli, i-courgettes, i-Brussels kunye ne-cauliflower; Iimbotyi - iiferethi ezimnyama kunye neembotyi; ukutya okutya okusanhlamvu kwinqanaba lesonka. Abathandi bewayini bathanda ukhetho olumhlophe - luqukethe iicidi eziphilayo ezikhuthaza umsebenzi olungcono wamathumbu.
Phuza kwakhona amanzi ahlanzekileyo, hlaziya naluphi ukutya ngokucophelela uze uhlale uvakalelwa emzimbeni inkululeko kwaye ukhululeke, uphile ngaphandle kokuqhaqha.
Isidlo sasekuseni esifanelekileyo sokulahleka kwesisindo
Ubhontshisi beentambo: izakhiwo ezixhamlayo
Izitya zendabuko zabantu behlabathi
Imiyalelo yokuxazulula imeko yongquzulwano kwisitoreji
Iingcebiso zokunyamekela iintyatyambo zasekhaya
Isobho seCream ye parsley
Iintlanzi: njani ukupheka izitya ezidliwayo
Ukufa ngokukhawuleza okanye iminyaka yokuhlukana, okungcono?
Yintoni eluncedo kwaye eyingozi kumazinyo?
I-arthroscopy yedolo, uxela
Indlela yokuyeka ukuthanda indoda, iingcebiso zengqondo yengqondo